Dị ka otu n'ime ndị na-asọmpi ụlọ ọrụ kachasị asọmpi, a na-eji ihe nkedo ntu anyị maka ịkwanye ọkpọkọ na mgbidi, ụlọ na ala. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, ọkachasị na Europe, Middle East na Asia. Ọzọkwa, elu kọntaktị nke elu na ala ọkara gburugburu nwere rọba rọba abụọ n'ime.
Galvanized ventilashion Pipe mwekota na Rubber
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị kpaliri ventilashion anwụrụ clamps na roba e mere maka ngwa ngwa kpochidoro usoro. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, ọkachasị na Yurop na Eshia. Ọzọkwa, a na-eji akwa roba EPDM eme ihe maka mkpuchi mkpọtụ.
Wood Diffuser Solid Oak Baseboard Diffuser Natural Oak na Light Oak
Iwu siri ike oak
Ihu nwere ihu
Mbughari faceplate maka esay nwunye na nhicha
Ochie dịnụ: Oak Natural, Light Oak
16 nlele Steel Boca Plate
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị Boca efere enwetawo a ukwuu nke na-ewu ewu gburugburu ụwa, karịsịa na North America.
41 21 C-Channel maka Ogwe Nkwado Channel Channel na Oghere
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị c-ọwa na-etinyere maka ọtụtụ ohere iji kpokọta fixtures. Ha anatawo nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Europe, Middle East na Asia. Ọzọkwa, e nwere ọgwụgwọ dị iche iche dị elu maka nhọrọ ị ga-ahọrọ: Nke nwere ike ịmalite, Zinc plated, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
Ọrụ dị arọ J-hanger Otu-Piece Pipe Strap
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị oké ọrụ j-hangers enwetawo a ukwuu nke na-ewu ewu gburugburu ụwa, karịsịa na North America. Ọzọkwa, enwere ike ịhazi ha dịka ihe ị chọrọ, dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji ya rụọ roba, tinye ma ọ bụ ọta. Ma enwere ọgwụgwọ dị iche iche dị iche iche maka nhọrọ gị: A ga-ebu ya ụzọ, zinc plasta, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
Wood Register Flushmount Ft Register na Steel Kemeghi Damper
* Nkọwa * mbukota & Mbupu mbukota-emekarị 20 PC / katọn ma ọ bụ ahaziri Lead Time N'ime ụbọchị 30 mgbe iji enen Port Wuhu, Shanghai, Ningbo Mbupu Site oké osimiri; n'ikuku; site awara awara Oge Ihe dị ka ụbọchị 7 * Ngwa A na-ejikarị ya eme ihe n'ụlọ obibi. * Kedu ka otu ngwaahịa si egosipụta ogo ya? . Njikwa na-ejide mmiri dị ala: Mgba ọkụ na-adọrọ mmasị na-arụ ọrụ na-adị mfe. . Ọ dịghị nkọ nkọ: nkenke stamping na aka-gwụ hụ na e ...
Rewghasa-na mwekota na Rubber (Ofu)
Dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị asọmpi nke ụlọ ọrụ, a na-eji ihe nkedo anyị na roba iji kwado ọkpọkọ na mgbidi, ụlọ na ala. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, ọkachasị na Europe, Middle East na Asia. Ọzọkwa, a na-emepụta mkpuchi roba EPDM maka mbelata mkpọtụ.